Uyikhetha njani ipakethi yakho yenaliti?
Yeyiphi inaliti / inaliti endiyifunayo? Injongo yeli nqaku kukukunceda ukhethe ipakethi efanelekileyo yeprojekthi yakho yenaliti yemichiza. Umatshini wokupakisha unxibelelwano phakathi kwempompo yenaliti kunye nezinto ezakhiwayo zokufaka inaliti ezahlukeneyo zokutywina, kubandakanya i-epoxy resin ...
Izisombululo ze-Injection Packer zoKwakha phantsi komhlaba
Fumana umahluko phakathi kwenkqubo yenaliti yangaphambi kwenaliti kunye ne-post-injection kulwakhiwo langaphantsi komhlaba. Kuyanceda ukukhetha izinto ezifanelekileyo kwimeko efanelekileyo kwinqanaba loyilo. Inaliti inokuchazwa njengokungeniswa kwezinto ezixineneyo emhlabeni okanye kubume bamanzi ...
6 Imigaqo esisiseko Of Inaliti Pump Machine babetha
Faka impompo entsha ye-centrifugal? Emva kokukhetha ngononophelo ubungakanani obufanelekileyo kunye nezinto eziphathekayo, qiniseka ukufaka impompo entsha ngokuchanekileyo ukuqinisekisa ufakelo oluyimpumelelo. Kubalulekile ukuseta isiseko ngokuchanekileyo kunye nokulungelelanisa umatshini wokupompa inaliti. Kwakhona kubaluleke kakhulu ukugqiba ip ...
Ukulinganisa ukusebenza kweComputer Grouting
I-infrared thermal imaging: uvavanyo olukhawulezayo noluthembekileyo lweekhemikhali grouting shotcrete izakhiwo Iikhemikhali grouting yenye yeendlela eziqhelekileyo zokulungisa iintanda kunye nokungena kwamanzi kulwakhiwo lwekhonkrithi. Ukuvavanywa okungafunekiyo kunciphisa ukungenelela kwezakhiwo zekhonkrithi xa uqhuba ...
Ngabe i-Polyurethane Grouting isisombululo esisebenzayo sokuLungisa?
Ukusetyenziswa kwearhente yokugungxula i-polyurethane kuxinano lomhlaba kunye nokubuyiselwa kolwakhiwo kuyitshintsha ngokupheleleyo indlela abaphathi bemisebenzi yoluntu kunye nabaphathi bezokwakha abacinga ngayo ngokubuyiselwa kunye nokufakwa endaweni. Ngenxa yokusebenza kweendleko kunye nezinto ezintsha kubuchwephesha benaliti, i-feasibilit ...
Uyikhetha njani ipakethi yenaliti
Ipakethi yenaliti lunxibelelwano phakathi kwempompo yenaliti kunye nezinto ezakhiwayo zokufaka inaliti ezahlukeneyo zokutywina, kubandakanya i-epoxy resin (EP), i-polyurethane (PU / PUR / SPUR), i-polyurea, i-acrylic gel, amanzi asebenzayo amagwebu, i-siloxane, iimveliso zesilicon Imicroemulsion, grout, c ...
Ungayifumana njani iGrisi efanelekileyo yeNgingqi Coupler
Yinto eyaziwayo ukuba ukuthambisa amahlahla kunye neebheringi kungasindisa kakhulu ukunxiba. Ukucutha ukusilela kunye nokulungiswa okubiza kakhulu kubaluleke kakhulu, kodwa kulula ukungahoywa! Nazi ezinye iingcebiso ezinokukugcinela imali kunye nexesha elininzi. 1. ukuthambisa ajikeleze Virtual: Wakhe wacinga ukuba ...
Iimpawu zoxinzelelo lwePompo yenaliti yoxinzelelo oluphezulu
Injini yedizili ebaleka okanye engenayo kwaphela inokubangelwa ziingxaki zokuhanjiswa koxinzelelo oluphezulu. Uninzi lweenjini zedizili zale mihla zineenkqubo zoxinzelelo oluphezulu ezilawulwa ngombane. Iinkqubo ezindala zoxinzelelo oluphezulu zisebenzisa impompo yoxinzelelo oluphezulu. Iingxaki zokuhanjiswa koxinzelelo oluphezulu kunokubangela amandla asezantsi, ...
Uxinzelelo oluphezulu lokuthambisa ulusu kunye nezixhobo
Uxinzelelo oluphezulu lokuthambisa (okanye ingono yegrisi, izixhobo zeZerk, iiplagi zokuthambisa, ukufakwa kweAlemite, iZerk) ngamanqaku okuthambisa kwinkqubo yoomatshini, kwaye igrisi inokongezwa kumbhobho wegrisi. Ngokufaka uxinzelelo kwivalve yebhola kwindawo efanelekileyo, igrisi iya kungena kwigumbi lokuthambisa ...
Ngaba i-polyurethane yenza ukuba iinkuni zingangenwa ngamanzi?
Hayi, i-polyurethane ayinakwenza umthi okhuni ungangeni manzi, kodwa inokwenza ukuba iinkuni zingangeni manzi. I-Polyurethane inika ukhuseleko kwimithi eqinileyo. Iyakwazi ukugxotha amanzi kunye nokuthintela ukufunxwa kwamanzi, kodwa ayisoze yawavala ngokupheleleyo amanzi, ke ayisoze yenze ukuba i-100% ingangenwa ngamanzi. Lyu kwakhona ukukhusela woo ...
Uxinzelelo oluphezulu lweGrouting Machine eyongezwayo- Grouting Packer
1. Zintoni iiPakethe zeNaliti? Iipakethe zokugungxula, ezikwabizwa ngokuba yimilomo yokugungxula, zisetyenziswa kakhulu kulondolozo lwamanzi kunye namandla ombane, iitonela, umasipala, ulwakhiwo lwezemveliso kunye noluntu kunye neminye imimandla, ngakumbi kwicandelo lekhonkrithi yemichiza. Eli lelona candelo liphambili ...
Ukuqonda ukuHanjiswa kweNdawo yokuNgena manzi eTenteni
Umenzi ngamnye unendlela yakhe yokwenza iintente zingangeni manzi, zinganyangeki nge-UV kwaye ziphefumle ngaxeshanye. Ukulinganiswa okungangeni manzi kwemathiriyeli kukwimilimitha, nokucaciswa okujongileyo xa uthelekisa iintente. Inani liphakathi kwe-800 mm kunye ne-10,000 mm. Inani libhekisa ...